facebook သုံးသူတိုငျးအတှကျ သငျခနျးစာ လူလိမျတှမှော ဂြိုမပါ - Tameelay
facebook သုံးသူတိုငျးအတှကျ သငျခနျးစာ လူလိမျတှမှော ဂြိုမပါ
မိနျးမသားတို့ရငျဖှငျ့ရာ Group မှ သမီးလေးတဈယောကျရေးတဲ့စာ
စာလေးကတော့ရှညျပါတယျ ဗဟုသုတရစခွေငျလို့ပါ လူလိမျတှမှော ဂြိုမပါလို့ပါ
ကိုယျရဲ့အားနညျးခကျြက သူတဈပါးကိုအရမျးစာနာပွီကူညီပေးခွငျးတာပဲ အဲ့ဒါကိုအခှငျ့ရေးယူပွီအလိမျခံရရုံတငျမကဘူး စတေနာပါအစျောကားခံလိုကျရတယျ
တနမှေ့ာ ခငျခဲ့ကွတယျပေါ့ သူကအရမျးစိတျဆငျးရဲနရေတယျပေါ့ ယောကျြားကခရီးတှပေဲသှားပွီး ပွနျလာရငျလညျးခဏပေါ့ သူ့ကိုအိမျထဲမှာပဲ သိမျးထားတယျ မကျြစိပိတျနားပိတျပေါ့ စီးပှားတှလေညျးမလုပျတတျတော့
ယောကျြားပွောတာပဲယုံပွီးနရေတယျပေါ့ စီးပှားတှကေလညျး ကနြပွေီးပေါ့ အမအေိ့မျကိုတောငျ ပွောငျးနရေပွီးဆိုပွီစတာတှပေေါ့
ကိုယျကလညျးသိတဲ့အတိုငျးပဲ မိနျးကလေးတှကေိုအဲ့ဒီလိုအဖွဈမြိုးဆိုရငျ မခံမရပျနိုငျနဲ့ ဘာလုပျခွငျလဲပေါ့ အားလုံးကူညီပေးမယျဆိုတာကွီးပဲ
အဲ့ဒီမှာ သူအလုပျလေးလုပျခွငျတယျပေါ့ ယောကျြားအကူညီလညျးမလိုခွငျဘူးပေါ့ သူ့အမနေဲ့တိုငျပငျပွီပွီ ညီမလေးနဲ့လုပျခွငျတယျပေါ့ ကူညီပေးပါဆိုပွီ
အဲ့ဒါဆိုရငျ အဈမအခုနတေဲ့နရောလေးမှာ ခရီးသှားဝနျဆောငျမှု့လေးလုပျဆိုပွီ ရှငျးပွပေးလိုကျတယျ အဲ့ဒီမှာ သူစလုပျတယျ တလကို ၆ /၈သောငျး လောကျတော့စရတယျပေါ့ ၃လလောကျလညျးကွာရော
အဈမဒါကိုစိတျဝငျးစားတယျ တကယျထညျထညျဝငျဝငျလုပျခွငျသှားပွီတဲ့ အဲ့ဒါဆို အဈမလမျးမတနျးကိုထှကျပေါ့ အဲ့ဒီမှာဆိုငျခနျးအသေးလေးငှားလုပျပေါ့နျော တဈခွားလုပျစရာလေးတှပေါရှငျးပွပွီး အစစအရာရာကူညီပေးတာပေါ့ ညီမလေးရယျ အဈမတဈယောကျထဲဆို မလုပျတတျမကိုကျတတျနဲ့ နှဈယောကျတူတူလုပျကွမယျနျောတဲ့ အဲ့ဒီမှာ သူ့အမကေလညျး လိုကျလာပွီး လုပျပေးပါ သမီးကိုအားကိုးပါတယျ ကူညီပေးပါဆိုပွီကိုယျကလညျး သနားတတျတာနဲ့ အားလုံးကူညီပေးခဲ့တယျ
ပါဆယျပစညျးပို့တာတှကေအစ အားလုံး ကိုယျဆီကပဲထောကျပံ့ပေးတယျ ရုံးကကားနဲ့ ပါ ဆညျပစညျးပို့ရသမြှအမွတျတှကေို ခှဲဝမေယူပဲ ၂ယောကျနာမညျနဲ့ဖှငျ့ထားတဲ့ဘဏျထဲမှာပဲထညျ့ထားပေါ့ နောကျထပျလုပျမညျ့ လုပျငနျးစဉျတှအေတှကျ စုထားထပျပွီးရငျးစရာလညျးမလိုတော့ဘူးဆိုပွီး လုပျငနျးအတှကျ ကိုယျက အားသှနျခှနျစိုကျသငျပေး နညျးလမျးတှပွေ ၄လလောကျလဲရောကျရော သူ့အမြိုးသားကပွနျရောကျလာပွီး ရုံးမှာလာထိုငျတယျ ကိုယျကလညျး သူတို့အဆငျပွရေငျပွီးတာပါပဲပေါ့ နောကျလညျးကရြော ပစညျးတှပေို့တာ သူ့ယောကျြားပို့ပေးမယျပေါ့ စတာတှစေုံလို့ပေါ့
၆လပွညျ့ခါနညျးလညျးကရြော သူ့ယောကျြားကဒီအလုပျကဝငျငှနေညျးတာရယျ ၊အခြိနျပေးရတာရယျကွောငျ့မလုပျနိုငျတော့ဘူးပေါ့ ( မနကျကို ၁၀နာရီမှ ညနေ၆နာရီထိပဲဖှငျ့ရတာပါ) စတာတှအေမြားကွီးပေါ့ ညှိကွညျ့တယျ ညှိမရရငျတော့ ခှဲပေါ့
ညီမကတော့ဆကျလုပျမယျ အဈမအဆငျမပွရေငျနားပေါ့ ပွောတော့ ကားကိုသူလိုခွငျပါတယျတဲ့ ဘုရား! ၊ ရုံးထဲမှာထညျ့ထားတာတှကေတဈယောကျတဈဝကျတဲ့ ရပွီ၊ ဘဏျထဲထညျ့ထားတာလညျးတဈယောကျတဈဝကျတဲ့ သူ့ယောကျြးက ခှဲခိုငျးတယျတဲ့ အမယျလေး ၊အဈမနဲ့ ညီမစလုပျတုနျးက စာခြုပျမှာထညျ့ဝငျထားတဲ့ငှလေညျးမရှိပါပဲနဲ့ ကားကရော ညီမနာမညျနဲ့ဝယျထားတာ တဈနှဈတောငျကြျောနပွေီလေ အဈမနဲ့ဘာဆိုငျလို့ပါလဲပေါ့ (ကနျြတာအားလုံးခှဲယူပါလို့ပွောလိုကျပါတယျ )နောကျနှဈရကျမွောကျမှာ အဲ့ဒီရုံးဘကျလညျးသှားရော ရှိသမြှရုံးခနျးထဲကပစညျးတှရေော ကားရော အားလုံးယူပွီး ပွေးသှားတယျ
သူ့အမြိူးသားကအိမျရှငျကိုပွောသှားတယျတဲ့ သူ့မိနျးမရဲ့ပိုကျဆံတှေ သိနျးဆယျဂဏနျးလောကျကုနျသှားတယျတဲ့ ကားကလညျးသူတို့ကားတဲ့ဆိုပွီး အဲ့ဒီကောငျမလေးကလူလိမျပါဆိုပွောသှားတယျတဲ့
ကိုယျလညျးရောကျရော အိမျရှငျပွောတာတှကေိုစာခြုပျပါတာတှနေဲ့ရှငျးပွမှပဲ အိမျရှငျက ကိုယျ့ကိုယုံသှားပွီးအေးသူတို့ မှနျရငျထှကျပွေးစရာမှမလိုတာကို အေးဟယျ
အခုမှသဘောပေါကျသှားပွီဆိုပွီး ကိုယျ့ရဲ့နာမညျလေးမပကျြသှားလို့ ဟငျ ခခြဲ့ရတယျ
ကိုယျလညျး လကျလှမျးမှီသလောကျ စုံစမျးတော့ နယျဘကျရောကျသှားတယျတဲ့ ကိုဗဈနဲ့ဖွဈနတေော့
သူဘကျထပျမလှညျ့နိုငျသေးဘူး ကလေးတှကေလညျးငယျနသေေးတာကွောငျ့ အပွငျမထှကျနိုငျသေးဘူး
ဆကျပွီးလုပျရမှာတှရှေိသေးတယျပွောခွငျတာက ကိုယျ့လိုအဖွဈစိုးမြိုးနဲ့ မကွုံစခွေငျတာပါ
လူလိမျတှကေ အခြိနျယူပွီး အရှိနျရတာနဲ့ သိမျးတော့တာပါပဲ
မိန်းမသားတို့ရင်ဖွင့်ရာ Group မှ သမီးလေးတစ်ယောက်ရေးတဲ့စာ
စာ​လေးက​​တော့ရှည်ပါတယ် ဗဟုသုတရ​​​စေခြင်လို့ပါ လူလိမ်​တွေမှာ ဂျိုမပါလို့ပါ
ကိုယ်ရဲ့အားနည်းချက်က သူတစ်ပါးကိုအရမ်းစာနာပြီကူညီ​ပေးခြင်းတာပဲ အဲ့ဒါကိုအခွင့်​ရေးယူပြီအလိမ်ခံရရုံတင်မကဘူး ​စေတနာပါအ​စော်ကားခံလိုက်ရတယ်
တ​နေ့မှာ ခင်ခဲ့ကြတယ်​ပေါ့ သူကအရမ်းစိတ်ဆင်းရဲ​နေရတယ်​ပေါ့ ​ယောက်ျားကခရီး​တွေပဲသွားပြီး ပြန်လာရင်လည်းခဏ​ပေါ့ သူ့ကိုအိမ်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားတယ် မျက်စိပိတ်နားပိတ်​ပေါ့ စီးပွား​တွေလည်းမလုပ်တတ်​တော့​
ယောက်ျား​​​ပြောတာပဲယုံပြီး​နေရတယ်​ပေါ့ စီးပွား​တွေကလည်း ကျ​နေပြီး​ပေါ့ အ​မေ့အိမ်ကို​တောင် ​ပြောင်း​နေရပြီးဆိုပြီစတာ​တွေ​​ပေါ့
ကိုယ်ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ မိန်းက​လေး​တွေကိုအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဆိုရင် မခံမရပ်နိုင်နဲ့ ဘာလုပ်ခြင်လဲ​ပေါ့ အားလုံးကူညီ​ပေးမယ်ဆိုတာကြီးပဲ
အဲ့ဒီမှာ သူအလုပ်​လေးလုပ်ခြင်တယ်​ပေါ့ ​ယောက်ျားအကူညီလည်းမလိုခြင်ဘူး​ပေါ့ သူ့အ​မေနဲ့တိုင်ပင်ပြီပြီ ညီမ​လေးနဲ့လုပ်ခြင်တယ်​​ပေါ့ ကူညီ​ပေးပါဆိုပြီ
အဲ့ဒါဆိုရင် အစ်မအခု​နေတဲ့​နေရာ​လေးမှာ ခရီးသွားဝန်​ဆောင်မှု့​လေးလုပ်ဆိုပြီ ရှင်းပြ​ပေးလိုက်တယ် အဲ့ဒီမှာ သူစလုပ်တယ် တလကို ၆​ /၈သောင်း ​လောက်​တော့စရတယ်​ပေါ့ ၃လ​လောက်လည်းကြာ​ရော
အစ်မဒါကိုစိတ်ဝင်းစားတယ် တကယ်ထည်ထည်ဝင်ဝင်လုပ်ခြင်သွားပြီတဲ့ အဲ့ဒါဆို အစ်မလမ်းမတန်းကိုထွက်​ပေါ့ အဲ့ဒီမှာဆိုင်ခန်းအ​သေး​လေးငှားလုပ်​ပေါ့​နော် တစ်ခြားလုပ်စရာ​လေး​တွေပါရှင်းပြပြီး အစစအရာရာကူညီ​ပေးတာ​ပေါ့ ညီမ​လေးရယ် အစ်မတစ်​ယောက်ထဲဆို မလုပ်တတ်မကိုက်တတ်နဲ့ နှစ်​ယောက်တူတူလုပ်ကြမယ်​နော်တဲ့ အဲ့ဒီမှာ သူ့အ​မေကလည်း လိုက်လာပြီး လုပ်​​ပေးပါ သမီးကိုအားကိုးပါတယ် ကူညီ​ပေးပါဆိုပြီကိုယ်ကလည်း သနားတတ်တာနဲ့ အားလုံးကူညီ​ပေးခဲ့တယ်
ပါဆယ်ပစည်းပို့တာ​တွေကအစ အားလုံး ကိုယ်ဆီကပဲ​ထောက်ပံ့​ပေးတယ် ရုံးကကားနဲ့ ပါ ဆည်ပစည်းပို့ရသမျှအမြတ်​တွေကို ခွဲ​ဝေမယူပဲ ၂​ယောက်နာမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဘဏ်ထဲမှာပဲထည့်ထား​ပေါ့ ​နောက်ထပ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်​တွေအ​တွက် စုထားထပ်ပြီးရင်းစရာလည်းမလို​တော့ဘူးဆိုပြီး လုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ်က အားသွန်ခွန်စိုက်သင်​ပေး နည်းလမ်း​တွေပြ ၄လ​လောက်လဲ​ရောက်​ရော ​သူ့အမျိုးသားကပြန်​ရောက်လာပြီး ရုံးမှာလာထိုင်တယ် ကိုယ်ကလည်း သူတို့အဆင်​ပြေရင်ပြီးတာပါပဲ​ပေါ့ ​နောက်လည်းကျ​ရော ပစည်း​တွေပို့တာ သူ့​ယောကျာ်းပို့​ပေးမယ်​ပေါ့ စတာ​တွေစုံလို့​ပေါ့
၆လပြည့်ခါနည်းလည်းကျ​ရော သူ့​ယောကျာ်းကဒီအလုပ်ကဝင်​ငွေနည်းတာရယ် ၊အချိန်​ပေးရတာရယ်​ကြောင့်မလုပ်နိုင်​တော့ဘူး​ပေါ့ ( မနက်ကို ၁၀နာရီမှ ည​နေ၆နာရီထိပဲဖွင့်ရတာပါ) စတာ​တွေအများကြီး​ပေါ့ ညှိကြည့်တယ် ညှိမရရင်​တော့ ခွဲ​ပေါ့
ညီမက​တော့ဆက်လုပ်မယ် အစ်မအဆင်မ​​ပြေရင်နား​ပေါ့ ​ပြော​တော့ ကားကိုသူလိုခြင်ပါတယ်တဲ့ ဘုရား! ၊ ရုံးထဲမှာထည့်ထားတာ​တွေကတစ်​ယောက်တစ်ဝက်တဲ့ ရပြီ၊ ဘဏ်ထဲထည့်ထားတာလည်းတစ်​ယောက်တစ်ဝက်တဲ့ သူ့​ယောက်ျးက ခွဲခိုင်းတယ်တဲ့ အမယ်​လေး ၊အစ်မနဲ့ ညီမစလုပ်​တုန်းက စာချုပ်မှာထည့်ဝင်ထားတဲ့​ငွေလည်းမရှိပါပဲနဲ့ ကားက​ရော ညီမနာမည်နဲ့ဝယ်ထားတာ တစ်နှစ်​တောင်​ကျော်​နေပြီ​​လေ အစ်မနဲ့ဘာဆိုင်လို့ပါလဲ​ပေါ့ (ကျန်တာအားလုံးခွဲယူပါလို့​ပြောလိုက်ပါတယ် ​)နောက်နှစ်ရက်မြောက်မှာ အဲ့ဒီရုံးဘက်လည်းသွား​ရော ရှိသမျှရုံးခန်းထဲကပစည်း​တွေ​ရော ကား​ရော အားလုံးယူပြီး ​ပြေးသွားတယ်
သူ့အမျိူးသားကအိမ်ရှင်ကို​ပြောသွားတယ်တဲ့ သူ့မိန်းမရဲ့ပိုက်ဆံ​တွေ သိန်းဆယ်ဂဏန်း​လောက်ကုန်သွားတယ်တဲ့ ကားကလည်းသူတို့ကားတဲ့ဆိုပြီး အဲ့ဒီ​​ကောင်မ​လေးကလူလိမ်ပါဆို​ပြောသွားတယ်တဲ့
ကိုယ်လည်း​ရောက်​ရော အိမ်ရှင်​ပြောတာ​တွေကိုစာချုပ်ပါတာ​တွေနဲ့ရှင်းပြမှပဲ အိမ်ရှင်က ကိုယ့်ကိုယုံသွားပြီး​အေးသူတို့ မှန်ရင်ထွက်​ပြေးစရာမှမလိုတာကို ​အေးဟယ်
အခုမှသ​ဘော​ပေါက်​သွားပြီဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့နာမည်​လေးမပျက်သွားလို့ ဟင် ချခဲ့ရတယ်
ကိုယ်လည်း လက်လှမ်းမှီသ​လောက် စုံစမ်း​တော့ နယ်ဘက်​ရောက်သွားတယ်တဲ့ ကိုဗစ်နဲ့ဖြစ်​နေ​တော့
သူဘက်ထပ်မလှည့်နိုင်​သေးဘူး က​လေး​တွေကလည်းငယ်​နေ​သေးတာ​​ကြောင့် အပြင်မထွက်နိုင်​သေးဘူး
ဆက်ပြီးလုပ်ရမှာ​တွေရှိ​သေးတယ်​​​ပြောခြင်တာက ကိုယ့်လိုအဖြစ်စိုးမျိုးနဲ့ မကြုံ​​စေခြင်တာပါ
လူလိမ်​တွေက အချိန်ယူပြီး အရှိန်ရတာနဲ့ သိမ်း​တော့တာပါပဲ
Categories General Knowledge, Tameelay Knowledge Tags 14 Post navigation